Articles tagged 'million man march'
Chaos at Zanu PF million-man march 26 May 2016 HARARE - Chaotic scenes characterised yesterday's Zanu PF youth league's so-called one million-man march as party supporters fought for T-shirts, bottled water and national flags, interrupting President Robert Mugabe during his speech. At one point, Zanu PF national political commissar, Saviou...
Million-man march to shut down capital 25 May 2016 HARARE - Zanu PF will today literally shut down the capital city as hordes of its supporters engage in a controversial “one million-man march” that will see them congregating at the so-called Robert Mugabe Square near the Harare Show Grounds. While today is Africa Day and therefore a public hol...
War vets hijack million-man march 25 May 2016 HARARE - War veterans linked to embattled Vice President Emmerson Mnangagwa have hijacked today's Zanu PF youth league “million-man march” announcing yesterday that they would not only march but direct the event. Despite several attempts by the governing party's youths to explain that the ...
Million-man march waste of scarce resources 25 May 2016 HARARE - While we support freedom of association, assembly and the right to demonstrate, we are still to fully comprehend how the Zanu PF one million-man march will solve the myriad of problems Zimbabweans face today. Just in case we are accused by some overexcited loonies paid to propagate pr...
Harare braces for Zanu PF toyi-toyi 23 May 2016 HARARE - All eyes will be on President Robert Mugabe's warring Zanu PF, as the party mounts its so-called million-man march in Harare on Wednesday — which supporters of embattled Vice President Emmerson Mnangagwa see as targeted at the Midlands godfather. After the MDC's massive show of force ...
Million-man march waste of resources - Ncube 22 May 2016 HARARE - Welshman Ncube's Movement for Democratic Change (MDC) has castigated Zanu PF's planned May 25 million-man march as a desperate ploy to prop up nonagenarian leader, President Robert Mugabe, who they said has led Zimbabwe to ruins. “The MDC notes the planned Zanu PF youth league-organis...
Plot to block million-man march thickens 13 May 2016 HARARE - Efforts by Zanu PF youths linked to embattled Vice President Emmerson Mnangagwa to block the controversial youth league “million-man” march are gathering pace with posters discouraging people from attending being splashed on social media. Following an announcement by the youths led by...
Million-man march set for Africa Day 8 May 2016 HARARE - The Zanu PF youth league has set May 25 as the date for the much-hyped and controversial “one million-man march” in Harare. The party's national deputy secretary for youth affairs Kudzai Chipanga claimed the march, which some war veterans have described as an anti-Vice President Emmer...
War vets to boycott million-man march 3 May 2016 HARARE - War veterans have threatened to boycott the controversial “million-man” march to support President Robert Mugabe against machinations by pro-VP Emmerson Mnangagwa supporters who want the Midlands godfather to take over from the 92-year-old before the 2018 elections. War veterans said...